Election 2019: Ndigbo ejikọla ọnụ katọọ iji ndị agha mee ntụliaka - BBC News Ìgbò
Election 2019: Ndigbo ejikọla ọnụ katọọ iji ndị agha mee ntụliaka
22 Febụwarị 2019
Ọtụtụ otu na-azọta maka ọdịmma ndị Igbo gụnyere Ohaneze, Alaigbo, Massob, Asetu na ndị ọzọ ekuniela na nzụkọ mberede ha nwere n'Enugwu were wepụta ọtụtụ nkwekọrịta nke gụnyere na Ndigbo ga-akwado onye kwere ha nkwa ighagharị ọchịchị Naịjiria.
Onye isi Ohaneze Ndigbo bụ Nnia Nwodo gụpụtara nkwekọrịta ahụ wee katọrọ ka gọọmentị siri kesaa ndị ọrụ agha n'ala Igbo maka ntuliaka wee yọọ Ndigbo ka ha ghara ịtụ egwu ọbụla kama ha gaa binye aka n'akwụkwọ.
Ebe foto si, Uche Akolisa
Ndigbo gbakọrọ na nzuko ebe Nnia Nwodo gụpụtara nkwekọrịta ha nwere
Ọkammụta prof. Ụzọdịmma Nwala bụkwa onyeisi Alaigbo development foundation kwuru na ndịgbo na-akwado Atiku na Obi n'ihi na ha ekwetala ịhazi ka obodo anyị siri dị, nke ga-enyere ndị igbo aka nke ukwuu.
Sinetọ Ben Obi kwadoro ya bụ nkwekọrịta, gwara ndị igbo ka ha jisie ike were PVC ha chụpụ ọchịchị nọ ugbua were tinye nke Atiku na Obi dịka otu niile a jiri kwekọrịta.
Chief Emmanuel Iwuanyanwu kwara arịrị na ndịgbo dịzị ka ha esoghị nwere obodo a were kwuo na ozuola.
Otu Ohaneze, Alaigbo, Massob nakwa Asetu so na ndị bịara ọgbakọ ahụ.
Onye nọchitere anya ndị massob bụ mazị Uchenna Madu kwuru na ihazighari obodo Naijiria dịka Atiku siri kweta bụ naani out n'ime ihe Massob na ndị zọ chọrọ, Ma kwuru na ha kwenyere ebe ndị Out Igbo niile gwara ha tinye aka.
Otụtụ ndị e jiri mara Ndị igbo bịakwara ya bụ nzụkọ mberede.
Vidio, Nigeria Election 2019: 'Agaghị m atụ vootu makana atụọla ya atụọ'
19 Febụwarị 2019
Vidio, Nigeria Election 2019: Mụta etu ị ga-esi tụọ vootu ebe a
21 Febụwarị 2019
Vidio, Nigeria Election 2019: Etu ndị akaọrụ mbiputa si erite uru n'oge ntuliaka
Mmiri bụ ndụ, mana ị ma na o nwere ike ibutere gị ọnwụ site n'ọrịa ndị a?
Ọgụ ime ụlọ PDP na APGA n'Anambra o nwereike ibutere ha ọdachị na ntuliaka na-abịa?
Vidio, E tu m siri si n'ịgba bọọlụ ogbe gbawara Rangers nakwa mba ụwa bọọlụ - Emmanuel Okala, Duration 4,05
21 Juun 2021
Ihe mere Jason Njoku nke Iroko TV jiri rịọ Ndigbo mgbaghara
Akụkọ ụgha gbasara nje Coronavirus i kwesiri ịgbachị nkịtị
Emelitere ikpeazụ na: 18 Maachị 2020